वाणिज्य बैंक परीक्षा विशेष : डिम्याट खाता भनेको हो ? लेख्नुहोस । « Nijamati Khabar
वाणिज्य बैंक परीक्षा विशेष : डिम्याट खाता भनेको हो ? लेख्नुहोस ।
वाणिज्य बैंक परीक्षा विशेष : डिम्याट के हो ? डिम्याट खाता किन आवश्यक छ ? लेख्नुहोस ।
डिम्याट भनेको भौतिकरुपमा भएका सेयर प्रमाणपत्रलाई अभौतिक (इलेक्ट्रोनिकीकरण) गर्ने प्रक्रिया हो । यो प्रक्रियाले सेयरको कारोबार गर्न छिटो छरितो रुपमा गर्न सघाउँछ ।
सिडिएससि धितोपत्र निक्षेप गर्न हितग्राही खोलेका तथा विद्युतीय माध्यममा निक्षेप गर्न मिल्ने धितोपत्र ग्रहन गरेको व्यक्ति हुन् । हितग्राहीले धितोपत्र निक्षेप गर्न निक्षेप सदस्यमार्फत केन्द्रीय निक्षेप कम्पनिसँग बेग्लै खाता नम्बरबाट खोलेको विद्युतीय खाता नै हितग्राही खाता हो । हितग्राहीले सिडिएससिमा डिम्याट् खाता खोल्नकालागि निक्षेप सदस्य मार्फत सम्पुर्ण विवरणहरु प्रणलीमा प्रविष्टि गरेपछि प्रणलीबाट उत्पन्न हुने १६ अंकको पृथक परिचय नम्बर नै हितग्राही परिचय नम्बर हो ।
नेपालमा पनि सेयर बजारसम्बन्धी कामलाई छिटो छरितो बनाउन डिम्याट सेयरको कारोबार सुरु भएको हो । साधारण सेयरको आवेदनका लागि समेत डिम्याट खाता अनिवार्य भएको छ । सेयर किनबेच गर्दा दाखिला फारम वा चलान फारम आवश्यक पर्दैन । कागजात प्रयोग नगर्नुपर्ने भएकाले कागजको बचाउ हुन्छ भने प्रिन्ट खर्च घट्दै जाने छ । अर्कातिर समयको पनि बचत हुन्छ ।
डिम्याट खाता खोल्दा हितग्राहीहरुलाई हुने फाईदाहरु:
डिम्याट खाता खोल्दा हितग्राहीहरुलाई विभिन्न फाइदाहरु हुने गर्दछ । भौतिक प्रमाणपत्रहरुमा भएका जोखिमहरुलाई हटाउँन् । शीघ्र फछ्र्यौट चक्र पुरा हुने तथा ठेगाना परिवर्तणको समस्याको निदान, धितोपत्रहरुको तुरुन्तै हस्तान्तरण तथा सार्वजनिक निष्काशनबाट वितरित सेयरहरुको शीघ्र वितरण । पार्टफोलीयो व्यवस्थापन तथा धितोपत्रहरुको बन्धकीमा सहजता आदि ।